Fomba fampiharana chatbot ho an'ny orinasanao | Martech Zone
Alatsinainy 26 Febroary 2018 Alahady, Martsa 4, 2018 Paul Chaney
Chatbots, ireo programa informatika izay maka tahaka ny resak'olombelona amin'ny alàlan'ny faharanitan-tsaina artifisialy, dia manova ny fomba fifandraisan'ny olona amin'ny Internet. Tsy mahagaga raha raisina ho toy ny mpizaha sy chatbots vaovao, tranonkala vaovao ny chat apps.
Siri, Alexa, Google Now, ary Cortana dia ohatra amin'ny chatbots daholo. Ary ny Facebook dia nanokatra Messenger, nahatonga azy tsy ho fampiharana fotsiny fa sehatra ahafahan'ny mpamorona manangana ekosistema bot iray manontolo.
Chatbots dia natao ho mpanampy virtoaly faratampony, manampy anao amin'ny fanatanterahana asa manomboka amin'ny famaliana fanontaniana, fahazoana torolàlana mitondra fiara, fanodinana ny termostat ao amin'ny tranonao an-tsaina, hatramin'ny filalaovana ny mozika tianao. Heck, iza no mahalala, indray andro any izy ireo mety hanome sakafo ny saka!
Na dia efa am-polony taona maro aza ny chatbots (daty taloha indrindra tamin'ny 1966), dia nanomboka nanaparitaka azy ireo ho an'ny orinasa ny orinasa.
Mampiasa ny marika chatbot hanampiana ny mpanjifa amin'ny fomba isan-karazany: fitadiavana vokatra, fanamafisana ny varotra, fitaomana fanapahan-kevitra amin'ny fividianana entana, ary fampiroboroboana ny fifandraisan'ny media sosialy, mba hitonona vitsivitsy. Ny sasany dia nanomboka nampiditra azy ireo ho toy ny sokajy serivisy ho an'ny mpanjifa.
Misy izao ny botika momba ny toetr'andro, ny bots vaovao, ny botam-bola manokana, ny fandaharam-potoana bot, ny botso-mandeha, ny botika mpamonjy aina, ary na ny botan'ny namana aza (satria fantatrao fa mila olona hiresahantsika isika, na dia bot io aza) .
A fianarana, notontosain'ny Opus Research sy Nuance Communications, dia nahatsikaritra fa ny 89 isan-jaton'ny mpanjifa dia te-hanao resaka amin'ireo mpanampy virtoaly mba hitady vaovao haingana fa tsy hikaroka ireo pejin-tranonkala na fampiharana finday samirery.
Ao ny didim-pitsarana - mihady chatbot ny olona!
Chatbot ho an'ny orinasanao
Efa nieritreritra ny hampiditra chatbot ho an'ny orinasanao ve ianao?
Ianao dia afaka. Ary na eo aza ny hevitrao dia tsy sarotra izany. Azonao atao ny mamorona bot fototra ao anatin'ny minitra vitsy monja amin'ny fampiasana ny sasany amin'ireo loharano voatanisa etsy ambany.
Ireto misy loharano sasany izay atolotray fa tsy mila kaody:
Botsify - Botsify mamela anao hanangana chatbot Facebook Messenger maimaimpoana nefa tsy misy kaody. Ny fampiharana dia mitaky dingana vitsivitsy fotsiny hananganana ny bot-nao. Nilaza ny tranonkala fa afaka mandresy ny Chatfuel amin'ny fotoana ilaina izy: dimy minitra monja amin'ny raharahan'i Botsify, ary ao anatin'izany ny fandaharam-potoanan'ny hafatra sy Analytics. Maimaimpoana ho an'ny hafatra tsy voafetra; manomboka ny drafitra vidin-javatra rehefa tafiditra amin'ny sehatra sy serivisy hafa ianao.
Chatfuel - Manamboara chatbot tsy misy kaody - izany no ahafahan'ny Chatfuel azonao atao. Araka ny tranokala, afaka mandefa bot ianao ao anatin'ny fito minitra fotsiny. Manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana chatbots ho an'ny Facebook Messenger ny orinasa. Ary ny zavatra tsara indrindra momba ny Chatfuel dia tsy misy vidiny hampiasana azy.
Azo resahina - Conversable dia sehatra fampahalalam-baovao ifanakalozan-kevitra amin'ny orinasa mba hamoronana intuitive, on-demand, traikefa mandeha ho azy amin'ny hafatra na fantsona am-peo.
mandresy - Miaraka amin'i Drift ao amin'ny tranonkalanao, ny resaka rehetra dia mety ho fiovam-po. Raha tokony ho ny marketing sy ny varotra nentim-paharazana sehatra miankina amin'ny endrika sy ny fanaraha-maso, Drift dia mampifandray ny orinasanao amin'ny fitarihana tsara indrindra amin'ny fotoana tena izy. Ny LeadBot dia manome ny mari-pahaizana ireo mpitsidika ny tranokalanao, mamaritra izay mpivarotra tokony horesahin'izy ireo ary avy eo dia hamandrihana fivoriana. Tsy ilaina takiana.
gupshup - Sehatra fandefasana hafatra an-tsaina mba hananganana traikefa ifampiresahana
ManyChat - ManyChat mamela anao hamorona bot Facebook Messenger ho an'ny marketing, varotra ary fanohanana. Mora sy maimaim-poana izany.
Mobile Monkey - Manangana chatbot ho an'ny Facebook Messenger ao anatin'ny minitra tsy mila kaody. Ny chatbots MobileMonkey dia mianatra haingana manontany sy mamaly ny fanontaniana momba ny orinasanao. Ny fampiofanana ny botika Monkey anao dia tsotra toy ny famerenana sy famaliana fanontaniana vitsivitsy isaky ny roa andro.
Raha te hanandrana manangana bot ianao samirery amin'ny alàlan'ny lampihazo, Gazety Chatbots manana tutorial izay manamarina fa afaka manao izany ianao ao anatin'ny 15 minitra.
Sehatra fampandrosoana Chatbot
Raha manana ny loharanom-pandrosoana ianao, dia azonao atao koa ny mamorona bots anao manokana mampiasa fitaovana izay manana fikarakarana langage voajanahary, faharanitan-tsaina artifisialy ary fianarana milina efa vonona:
Amazon Lex - Amazon Lex dia serivisy hananganana rindrambaiko ifanakalozan-kevitra amin'ny fampiharana rehetra izay mampiasa feo sy lahatsoratra. Amazon Lex dia manome ny fandrosoana mianatra lalina amin'ny fanekena kabary mandeha ho azy (ASR) amin'ny famadihana ny kabary ho amin'ny lahatsoratra, ary ny fahatakarana ny teny voajanahary (NLU) hahafantarana ny tanjon'ny lahatsoratra, hahafahanao manangana rindranasa misy traikefa be mpampiasa sy resaka ifanaovana amin'ny fiainana. fifandraisana.
Rafitra Azure Bot - Manangana, mampifandray, manaparitaka ary mitantana bot bongo manan-tsaina hifaneraserana amin'ny mpampiasa anao amin'ny tranokala, fampiharana, Cortana, Microsoft Teams, Skype, Slack, Facebook Messenger, ary maro hafa. Manomboha haingana miaraka amin'ny tontolon'ny fananganana bot feno, mandritra ny fotoana andoavanao fotsiny ny zavatra ampiasainao.
Chatbase - Ny ankamaroan'ny bots dia mila voaofana ary ny Chatbase dia natsangana manokana ho an'ity dingana ity. Fantaro ho azy ny olana ary mahazoa soso-kevitra amin'ny fanatsarana haingana amin'ny alàlan'ny fianarana milina.
Dialogflow - Omeo fomba vaovao hifaneraserana amin'ny vokatrao ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fananganana fifandraisana an-tserasera sy ifanakalozan-kevitra mifototra amin'ny feo ampiasain'ny AI. Mifandraisa amin'ireo mpampiasa amin'ny Google Assistant, Amazon Alexa, Facebook Messenger, ary sehatra sy fitaovana malaza hafa. Dialogflow dia tohanan'ny Google ary mandeha amin'ny fotodrafitrasa Google, izay midika fa afaka mivezivezy amin'ny mpampiasa an-tapitrisany ianao.
Sehatra Facebook Messenger - Ny bot ho an'ny Messenger dia natao ho an'izay manandrana manatratra ny olona amin'ny finday - na lehibe na kely ny orinasanao na ny hevitrao, na ny olana ezahinao vahana. Na manamboatra rindranasa ianao na traikefa hizaranao ny fanavaozana ny toetr'andro, hanamafisana ny famandrihana ao amin'ny hotely, na handefasana tapakila avy amin'ny fividianana vao haingana, ny bots dia ahafahanao manokana, mavitrika kokoa ary mandamina kokoa amin'ny fomba fifandraisanao. miaraka amin'ny olona.
IBM Watson - Watson amin'ny rahona IBM dia mamela anao hampiditra AI matanjaka indrindra manerantany amin'ny rindranasao ary mitahiry, mampiofana sy mitantana ny angon-drakitrao amin'ny rahona azo antoka indrindra.
LUIS - Serivisy mifototra amin'ny fianarana milina hananganana fiteny voajanahary ho lasa fampiharana, bot ary fitaovana IoT. Mamorona haingana modely vonona ho an'ny orinasa, manatsara hatrany.
Pandorabots - Raha te hanana ny geekanao ianao ary manangana chatbot izay mila kaody kely, dia ho anao ny Pandorabots 'Playground. Serivisy maimaimpoana izy io izay mampiasa fiteny fanoratana izay antsoina hoe AIML, izay midika hoe fiteny fanamarihan-tsaina artifisialy. Na dia tsy hanao toa an'io aza izahay dia mora, ny tranonkala dia manome fampianarana an-dàlana tsikelikely amin'ny alàlan'ny rafitra AIML hanombohana anao. Etsy ankilany, raha tsy ao amin'ny lisitr'ireo "hatao" ny fananganana chatbot, dia hanao izany ny Pandorabots manangana iray ho anao. Mifandraisa amin'ny orinasa amin'ny vidiny.
Ny lakilen'ny fampiasana chatbot mahomby dia ny hahazoana antoka fa manatsara ny traikefan'ny mpanjifanao izy ireo. Aza manangana iray fotsiny satria io no fironana mafana. Manaova lisitry ny fomba mety hahasoa ny mpanjifanao, ary raha afa-po ianao chatbot dia afaka manome tanjona mahasoa, avereno jerena ireo loharano voatanisa etsy ambony mba hahitanao ny mety aminao.
Tags: aiamazon lexfahaizana artifisialydrafitra bot azurebotsifybot miresakamagazine bots miresakachatbasechatbotschatbots ho an'ny orinasachatfuelazo resahinaCortanafifampiresahanamandresyfacebook messengersehatra mpitondra hafatra facebookgoogle botsgupshupahoana noibm watsonfahazoana ny fitenyluisfianarana milinaManychatmicrosoft luisMicrosoft Teamsmobilemonkeyfanodinana langage voajanaharynlppandorabotsSkypehiahotrahoranareo
Paul Chaney dia Mpanoratra ho an'ny fironana madinidinika. Mandrakotra ny vaovaon'ny indostria izy, ao anatin'izany ny resadresaka ifanaovana amin'ny mpitantana sy ny indostria momba ny vokatra, serivisy ary fironana misy fiatraikany amin'ny orinasa kely. Mpivarotra Internet efa ela izy izay manana traikefa 20 taona amin'ny fanampiana ireo orinasa madinidinika hampiasa ny Internet amin'ny tanjona ara-barotra. Taloha, izy dia tonian-dahatsoratry ny Web Marketing Today ary tonian-dahatsoratra efa ela nitondra anjara biriky ho an'ny Ecommerce Praktika.
Aug 23, 2019 amin'ny 2: 23 AM
Asa tsara Paul! Eny tokoa, chatbots dia lasa fitaovam-piadiana miafina vaovao nampidirina hitondra ny traikefan'ny mpanjifa amin'ny sehatra vaovao. Liana foana aho hahafantatra bebe kokoa momba ny chatbots sy ny AI, ary tsy maintsy milaza aho fa ireo chatbots ireo sy ny endrik'izy ireo dia tsy hahagaga ahy mihitsy. Vao tsy ela akory izay no nitsidihako bilaogy vitsivitsy nitantara karazana chatbot isan-karazany sy ny fomba fanaovan'izy ireo fanavaozana ny tontolon'ny varotra. Ity ny rohy. (https://www.navedas.com/the-chatbot-marketings-new-secret-weapon/ ary https://mobilemonkey.com/blog/best-chatbots-for-business/)